बालबालिकालाई लोकल कुखुराको अण्डा कि बटाईको अण्डा राम्रो ? – Krazy NepaL
March 19, 2021 981
Prev७ कागती प्रयोग गर्ने आश्चर्यजनक तरिका, देखाउनै लाज लाग्ने हात होस् या अनुहार एक छिनमै सफा
Nextकाँचो प्याज खानु हुन्छ ? खानु हुन्न भने आजै बाट खानुहोस् यी ४ रोग निको हुन्छ !
खाना सङ्गै पानी खाने बानी छ? हुन सक्छ यस्तो ख’तरा, जानी राखौं ।